Fiparitahan'ny valanaretina :: Mihoatra ny arivo ireo mararin’ny Covid-19 an-dalam-pitsaboana • AoRaha
Fiparitahan’ny valanaretina Mihoatra ny arivo ireo mararin’ny Covid-19 an-dalam-pitsaboana
Efa nihoatra ny arivo ny isan’ireo mararin’ny Covid19 manaraka fitsaboana, tamin’ ny tatitra nomen’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pitsaboana amin’ ny ady amin’ity valanaretina ity (CCO) omaly. Tafakatra dimy amby efapolo sy arivo izy ireo, taorian’ny fanambaràn’ny profesora an’ireo marary vaovao miisa telo amby sivifolo, omaly.
Afak’omaly no efa nisy marary vaovao miisa roa amby efapolo nolazainy ka teto Antananarivo avokoa ireo fito amby telopolo, raha avy any Fenoarivo Atsinanana (roa) sy Sainte-Marie (telo) ny ambiny.
Hatramin’ny 19 marsa, nahitana ny tranga voalohany teto Madagasikara, dia niisa roa amby roapolo sy sivinjato sy arivo ireo nitondra ny tsimok’ aretin’ny Covid-19 tamin’ireo enina amby enimpolo sy roa alina notilina sy nakana singa.
Teto Antananarivo ny iraika ambin’ny folo, Toamasina (roa), raha iray avy ny tany Sainte-Marie sy Fenoarivo Atsinanana tamin’ireo tranga vaovao. “Tsy fantatra kosa ny toerana nisy an’ireo olona valo amby fitopolo notilina teny amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Ampefiloha”, hoy ny mpitondra tenin’ny CCO.
Tsikaritra tamin’ny tarehimarika nolazain’ny Profesora Vololontiana Marie Danielle ny fiakaran’ny isan’ireo marary mafy atahorana vokatry ny valanaretina Covid-19, afak’ omaly. Niampy valo ambin’ny folo izany ka tafakatra enina ambiny roapolo. Nihena ho roapolo anefa io isa io, omaly.
Nijanona ho enina ambin’ ny folo ihany ireo olona lavon’ ny Covid-19. Nahatratra roa amby enimpolo sy valonjato indray no sitrana tanteraka, taorian’ny fivoahan’ireo marary sivy amby telopolo ny hopitaly, omaly, raha efatra amby efapolo kosa, afak’omaly.
Fahafatesana olom-boafidy Niiba ny valin’ny fitiliana an’ilay depiote nodimandry
Fifindran’ny covid-19 :: Nirongatra ny isan’ny marary teto an-drenivohitra
Fampidiram-bola :: Orinasa telo amby sivifolo nisitraka sahady ny tosika “Miarina”